Fiarabe mpitatitra entana : tsy ekeny ny lanja latsaky ny 22 t
Par Taratra sur 27/01/2016 Economie, NS Malagasy
Tsy eken’ny mpitatitra ny fanarahana ny fenitra. Mifandraika amin’ny lafin-javatra maro anefa ny fenitra sy ny fepetra. Tombontsoam-bahoaka ny fahatezan’ny lalana sy ny kalitaon’ny fiara mivezivezy. Tokony ho hentitra ny fanaraham-penitra! Manafaingana ny fahasimban’ny lalana eto Madagasikara ny tsy fanarahan’ireo mpampiasa lalana ny fenitra tokony harahina. Ho an’ny lalana, efa manaitra ny rehetra ny teknisianina […]
Mpahay lalàna Randriamanantena Jules : “Tsy fananan’ny mpikamban’ny CSM ny fitsarana ».
Par Taratra sur 27/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
« Mihevitra azy ho Andriamanitra kely ny mpitsara iray raha voafidy eo anivon’ny mpikambana amin’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) na SMM ka mieritreritra izy fa lasa fananana ho azy ny fitsarana ary mpiasany ireo mpitsara. Hafindra toerana sao manelingelina amin’ny afera maloto ataony ireo tsy mitovy hevitra amin’ izy ireo, tahaka ny nahazo ny mpitsara […]
« Alatsinainy mainty » : « Tsy hanameloka ireo nandoro aho… », hoy Ravalomanana
Nentina am-bavaka hifampaherezana amin’ny finoana sy fanantenana teny amin’ny Magro Tanjombato, omaly, ny fahafito taon’ny « Alatsinainy mainty », 26 janoary 2009. Nitondra ny heviny manoloana izany ny filoha mpanorina ny orinasa Tiko sy ny Magro, Ravalomanana. « Tsy hanameloka na iza na iza izahay tamin’ireny fandrobana sy fandorana ny orinasa samihafa ireny… Ny lasa, homba ny […]
Ladoany : tsy ampiasaina intsony ny taratasy
Par Taratra sur 27/01/2016 Divers, NS Malagasy
Nankalazaina teto Toamasina, omaly 26 janoary, ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny ladoany. Voalaza fa mampihatra ny fenitra iraisam-pirenena mifehy ny faditseranana maneran-tany ny eto Madagasikara. Ao anatin’izany ny fampiasana ny teknolojia niomerika, tsy ampiasana ny taratasy intsony, amin’ny alalan’ny Sydonia++, napetraky ny orinasa Gasynet. Tombontsoa azo amin’ny fampiasana ny niomerika, tsy hivezivezy intsony ny manan-draharaha, […]
Fivoriana an-tampon’ny UA : hodinihina ny zon’olombelona
“2016: taona afrikanina ho an’ny zon’olombelona miaraka amin’ny fijerena manokana ny zon’ny vehivavy” no lohahevitry ny fivoriana an-tampony ara-potoana faha-16 hataon’ireo filoham-panjakana sy lehiben’ny governemanta eo anivon’ny Vondrona afrikanina (UA) atsy Addis-Abeba, Etopia, ny 30 sy 31 janoary ho avy izao. Fantatra fa anisan’ny handray anjara amin’izany ny delegasiona malagasy tarihin’ny filoha Rajaonarimampianina. Manana ny […]
Andrimpanjakana : hatsangana ny HCDDED
An-dalana izao ny fananganana ny Filankevitra ambony ho amin’ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna na ny Haut conseil pour la défense de la democratie et de l’Etat de droit (HCDDED), araka ny And. 43 ao amin’ny lalàmpanorenana. Nanomboka ny 26 janoary ary hifarana ny 3 febroary, ohatra, ny fametrahana antontan-taratasy amin’ny fidirana ho […]
Par Taratra sur 27/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Saron’ny zandary tao Manakara, afakomaly ny lehilahy iray saika hivarotra basy Kalachnikov sy bala mitentina 2 600 000 Ar. Tsy fantatra kosa izay nahazoany ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity… Teo amoron-dranomasin’Ampilao Manakara no tratran’ny zandary ity lehilahy voarohirohy ho nivarotra basy Kalachnikov sy bala ity. Araka ny loharanom-baovao voaray, nahazo loharanom-baovao ny zandary fa mivarotra basy […]
Oniversiten’i Maninday : mandrahona hitokona indray ny mpampianatra
Tsy hampianatra mihintsy ireo, mpampianatra eny amin’ny oniverisiten’ny Toliara raha tsy ahitam-bahaolana ny momba ny ora fanampiny sy ny olana mahakasika ny tanin’ny oniverisite eny Maninday. Nandritra ny fivorian’ireo mpampianatra mpikaroka , ny asabotsy lasa teo dia nanapa-kevitra izy ireo fa tsy hampianatra raha tsy voaloa ny 50% volan’ny ora fanampiny ny taona 2013-2014 alohan’ny […]
Par Taratra sur 27/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Notafihin’ny andian-jiolahy miisa dimy nitondra fitaovam-piadiana, afakomaly ny ben’ny Tanànan’i Londona, kaominina ambanivohitr’i Soavinandriana. Voalaza fa niditra an-keriny tao amin’ilay niharam-boina izy sady nanapoaka tsipoapoaka ka niparitaka ny olona. Lasan’izy ireo ny lelavola mitentina 2 tapitrisa Ar sy tablette iray. Nandositra nizotra any amin’ny faritr’i Faratsiho ireo jiolahy. Tsy nisy ny olona naratra. Mitohy ny […]
Mangabe Toliara : ramatoa iray maty ndomin’ny camion
Tsy fantatra ny nahazo ity mpamily iray ity raha niditra ny tananan’i Mangabe avy any Mitsinjo Betanimena nadona ary nahafaty ramatoa iray. Araka ny vaovaoa azo raha tonga teo amin’io toerana io ity fiara ity dia nadona ity ramatoa ity, somary fiolanan io toerana io ka avy hatrany nitampify ilay sisiny misy ity ramatoa ity […]
Zokiny indrindra eran-tany ? : 135 taona i Be Njara izao
Azo lazaina ho anisan’ny olona tratra antitra indrindra eto amintsika i Be Njara antsoin’ny zafiny hoe Kako Be, monina ao Ambodiazinina Toamasina II. Efa mananika ny faha-135 taona izy ankehitriny. Mbola afaka miteny tsara izy, saingy eo amin’ny fahitana no sahirana ary efa tsy afaka mandeha intsony. Tsodranon-drazana malagasy ny hoe « enga anie ka ho […]
Fidirana ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo : voafitaky ny depiote Tim ny Emmo/Reg
Efa niatrana sy mailo amin’ny fotoana rehetra. Tonga maraina teny amin’ny manodidina ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo ny eo anivon’ny mpitandro filaminana, avy amin’ny Emmo/Reg, omaly. Tonga any am-pototsofin’izy ireo ny hidiran’ny depiote Tim ho etsy amin’io kianja manan-tantara io, saingy tsy henon’ny mpitandro filaminana hatramin’ny farany ny fiovan’ny fandaharam-potoana. Tsy tanteraka rahateo izany fikasan’ireto mpomba […]
Par Taratra sur 27/01/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nahitsy ny fanambaran’ny filohan’ny mpanolotsain’ny kaominina Ivato, amin’ny fanararaotam-pahefana ataon’ireo « sécurité civile » sasany. Anisan’izany ny nataon’ity fiara 4X4, izay nifaoka fiara telo, ka nahavoa ny ben’ny Tanànan’Ivato sy ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety, teny Imerinafovoany, afakomaly alina ity. Naratra mafy teo amin’ny tratrany ary mbola manaraka fitsaboana Randrianarisoa Penjy, efa nahazo ny fitsaboana […]
Jafetra Randriamanantsoa : « Fidèle au monde rural »
Par Taratra sur 26/01/2016 NS Français, Opinion
Jafetra Randriamanantsoa fait partie des six sénateurs HVM récemment élus dans la province d’Antananarivo pour le compte de la région Bongolava. Cet ancien coordonnateur national du Projet jeunes entreprises rurales du Moyen-Ouest (Projermo) a livré son impression sur son choix politique. Les Nouvelles : Pourquoi ce revirement dans le monde de la politique ? – […]
“Cross Country Analamanga” : safotra i Nanie vao nahazo ny voalohany
Par Taratra sur 26/01/2016 Divers, NS Malagasy
Ny “cross country” no nanokafan’ny seksiona Analamanga, taranja atletisma ny taom-pilalaovana. Fihaonana notontosaina ny alahady lasa teo, teny amin’ny kianjan’Ankatso. Nahazo ny laharana voalohany, teo amin’ny sokajy vehivavy “sénior”, Razafindrafara Nanie, avy amin’ny klioba 3F ANS. Safotra anefa ny tovovavy, teo am-pahatongavana, ka voatery notsaboina haingana. Avotra soa aman-tsara izy, rehefa nahazo ny fikarakarana avy […]
Loka J. Ramanankamonjy : 13 ireo nahazo fankasitrahana
Par Taratra sur 26/01/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nahatratra 40 mahery ny nandray anjara tamin’ny fiofanana. Valo taona mahery ny zandriny indrindra raha 70 taona ny zokiny indrindra. Tontosa nandritra iny herinandro lasa iny ny andiany faharoa amin’ny hetsika “Loka Joseph Ramanankamonjy“. Nofaranana tamin’ny fanolorana fankasitrahana izany, ny alahady teo tetsy amin’ny Tahala Rarihasina. Mitontaly 13 ireo nandrombaka izany ka voalohany indrindra i […]
Par Taratra sur 26/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Notontosaina, omaly, teny amin’ny foiben’ny Omda ny famindram-pitantanana teo amin’ny tale teo aloha Haja Ranjarivo sy ny tale vaovao Charles Maurin Poty. « « Directeur par Résolution » ny anarana hoentiny. Izy no hisahana ny asan’ny talen’ny Omda ao anatin’ny efa-bolana », hoy i Samoëla, filohan’ny filan-kevipitantanan’ny Omda. Ahitana « délégués » telo miara-miasa aminy akaiky. Ny iray notendren’ny minisiteran’ny Kolontsaina […]
Echecs : hametraka ny « mini-chess » ny federasiona
Tanjon’ny federasion’ny taranja échecs eto amintsika ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ary fanapariahana ny taranja. Araka izany, hametraka ny “mini-chess”, échecs lalaon’ny ankizy, izy ireo. “Mini-chess”. Hoezahin’ny federasiona malagasin’ny échecs (FMJE) hapetraka ary haparitaka manerana ny Nosy io fandaharana iray io. Araka ny anarany, eo amin’ny taranja échecs ny “mini-chess”. Izany hoe, échecs lalaovin’ireo ankizy sy […]
Fotodrafitrasa : notokanana ny «Complexe sportif de Mahajanga»
Notokanana, tamin’ny fomba ofisialy, ny alahady lasa teo, tany Mahajanga, ilay fotodrafitrasa ara-panatanjahantena na ny Complexe sportif de Mahajanga. Ny filoham-pirenena mihitsy no nanatanteraka izany, tany an-toerana. Nambarany, taorian’ny hazakazaka nataony niaraka tamin’ireo atleta sy ny vahoaka tany an-toerana, fa miaraka ary manohana ny fanatanjahantena sy ny tanora ary manana fahatokisana sy te hiaraka amin’ny […]
Misy sehatra efatra : nahazo toeram-panofanana vehivavy Antananarivo
Afaka mandray mpiofana ny toeram-panofanana vehivavy fahadimy miorina eny Tsimbazaza nanomboka omaly. Tetikasa niarahan’ny vadin’ny filoham-pirenena sy ny ekipany tao anatin’ny roa taona ny fampivoarana ny vehivavy amin’ny fanofanana azy ireny hananany fidiram-bola maharitra. Lalam-piofanana efatra no azo trandrahina ao, fahandroana sakafo, fikoloana zaridaina, zaitra ary ny informatika. Samy efa ampy fitaovana handray ny mpiofana […]
Toeram-piantsonan’ny fiara : 500 Ar isan’ora manomboka amin’ny febroary
Hanomboka amin’ny voalohan’ny volana febroary izao ny fampiharana ny sara-piantsonan’ny fiara ho 500 Ar isan’ora amin’ireo toerana maromaro eto Antananarivo. Fantatra izany nandritra ny resaka nifanaovana tamin’ny mpandrindra ny orinasa Easypark, rasamimanantsoa Tiana, izay mpiara-miombon’antoka amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fitantanana vaovao ny toeram-piantsonan’ny fiara. Toerana voafaritra ihany aloha hatreto no hanaovana ity tetikasa andrana […]
Tantara amin’ny radio : feno dimy taona ny Fantaro
Mankalaza ny fahadimy taona nijoroany, amin’ity taona ity, ny fikambanana Fantaro (fanabeazana amin’ny alalan’ny tantara ny lafiny rehetra maha olona). Matevina ny fandaharam-potoana hoenti-manamarika izany fa anisan’ny misongadina ny fampivelarana ny fikambanana amin’ny alalan’ny hetsika samihafa. Iray amin’izany ny “Vato” na “Volavola ny ho andrarezin’ny tantara amin’ny onjam-peo“. Hetsika miantefa amin’ireo mpankafy tantara sy manan-talenta […]
Kere any atsimo : nandefa masomboly hamokarana ny minisiteran’ny Fambolena
Par Taratra sur 26/01/2016 Economie, NS Malagasy
Nanolotra vahaolana ny minisiteran’ny Fambolena manoloana ny tsy fahampian-tsakafo any atsimon’ny Nosy. Masomboly hamokarana ary vokatra ao anatin’ny fotoana fohy, mba ho sakafo hivelomana maharitra fa tsy mandalo. Tsy nitazam-potsiny! Mahatsapa tsara ny tsy fahampian-tsakafo mianjady ny any atsimo ny minisiteran’ny Fambolena. Nambaran’ny minisitry ny Fambolena, Ravatomanga Roland, omaly, fa efa lasa any atsimo ny […]
Nosantarina tany Ambositra, ny 22 janoary teo ny taom-piasana 2016 ho an’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps). Nitarika azy ny tale jeneraly, Arizaka Rabekoto Raoul sy ny filohan’ny filankevi-pitantanana, Botoudi Rémi Henri. Notokanana ny tranobe anankiroa, fonenan’ny mpiasa, nitsangana koa ny klioba Cnaps zandriolona any an-toerana avy ao amin’ny kilasy fahenina ao amin’ny CEG […]
« Précédent 1 … 1 463 1 464 1 465 1 466 1 467 … 1 487 Suivant »